छाउ नबार्नेलाई पुरस्कार, बार्नेलाई दण्ड ! - Hamro Abhiyan
छाउ नबार्नेलाई पुरस्कार, बार्नेलाई दण्ड !
२८ साउन, डोटी । डोटी पूर्वीचौकी गाउँपालिकाले छाउ नबार्ने महिलालाई पुरस्कार दिने व्यवस्था गरेको छ ।
छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्नका लागि सचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष निर्मला साउँद बताउँछिन् ।
‘हामी छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्ने योजनामा छौँ, छाउपडी नबार्ने महिलालाई पुरस्कार स्वरुप पैसा दिनेछौं,’ सुदूरपश्चिम प्रदेशबाटै छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्नु पर्ने बताउँदै निर्मलाले थपिन्, ‘सुरुआत हामी पूर्वीचौकी गाउँपालिकाबाटै गर्छौं ।’
समाजमा रहेको छाउपडीसँग सम्बन्धित धार्मिक विश्वास अन्त्य गर्नका लागि महिला सशक्त हुन पर्ने साfउँदले बताइन् ।
गाउँपालिकाले छाउपडी नबार्नेलाई पुरस्कार मात्र होइन बार्नेलाई दण्डको पनि व्यवस्था गरेको छ । ‘महिनावारी भएका बेला छाउ बार्नेलाई गाउँपालिकाबाट प्रदान हुने सेवा सुविधामा रोक लगाउने निर्णय भएको गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकवहादुर खड्काले बताउ ।
‘व्यक्तिगत घटना दर्ता, सामाजिक सुरक्षाभत्तालगायतका सेवा सुविधा पनि नदिने निर्णय भएकोछ,’ खड्काले भने, ‘छाउपडी प्रथाका कारण महिलाको ज्यान असुरक्षित हुने र कुसंस्कारले समेत निरन्तरता पाउने भएपछि गाउँपालिकाले छाउपडी अन्त्यका लागि कठोर निर्णय गरेको छ ।’
रातो र हरियो झण्डा
गाउँपालिकाका अध्यक्ष बोगटीले भने, ‘अब हामी प्रत्येक घरमा झण्डा गाड्छौँ, जस्ाले समाजिकरुपमा तिरस्कार जस्तो हुन्छ । नैतिक दबाव पर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।’
करिब तीन सय छाउगोठ
पूर्वीचौकी गाउँपालिकामा करिब तीन सय छाउगोठ रहेको पूर्वीचौकी गाउँपालिकाले जानकारी दिएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष बोगटीले गाउँपालिकाका ७ वडामा तीन सयको हाराहारीमा छाउगोठ रहेको अनुमान गरे ।